Friday June 20, 2014 - 19:53:35 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
khudbado, xog ama afkaar, kuwaas oo lagu gudbiyo maqal, muuqaal ama qoraal, iyadoo la adeegsanayo wargeysyada ama qalabka kale ee warbaahinta sida:
khudbado, xog ama afkaar, kuwaas oo lagu gudbiyo maqal, muuqaal ama qoraal, iyadoo la adeegsanayo wargeysyada ama qalabka kale ee warbaahinta sida: idaacadaha, telefeshinada, wakaaladaha wararka, website-yada, khudbadaha, filimada, farshaxanka sawirrada, joornaalada, buugaagta iyo wax kasta oo la daabaco si guudna loogu soo bandhigayo bulshadda. Halkaan kala deg Xeerka cusub ee Saxaafadda Somalia fadlan fikradaada ku soo dir [email protected]
Maadaama Saxaafaddu tahay mid u adeegta dadweynaha waa in ay lahaato xeer iyo xeer nidaamiye. Saxaafaddu waxey ka qeyb qaadataa horumarka, nabadgelyada, kala dambeynta, isqadarinta, cadaaladda iyo nabad kuwada noolaanshaha. Dhanka kale saxaafadda waxaa ka reebban been abuurka, hurinta colaadaha, is naceybka, dacaayadda aan salka laheyn iyo marin habaabinta xaqiiqada/runta.
Hawlaha saxaafadda iyo warbaahinta waxaa nidaaminaya isla markaana soohdimaynaya xeerkan.
Helidda adeeg saxaafadeed oo hufan ayaa dadka fursad u siin kara helitaanka warar sugan arrintaas oo u sahleysa in dadku ay si wanaagsan uga qeybgalaan la jaanqaadidda Dimuquraadiyadda iyo nidaamka dawliga ah, waxayna is hortaagi karaan talaabooyinka wax yeelaya sharafta qaranka sida, musuq maasuqa, eexda iyo isku xadgudubka.
Saxaafadda wanaagsan waa tan shacbiga ugu yeerta jidka horumarka iyo asluub wanaagga, kana waanisa wixii waxyeelaya madax bannaanida iyo midnimada Qaranka.
Ugu dambeyn, xeerkan wuxuu qeexayaa shuruucda u degsan saxaafadda Qaranka Soomaaliyeed.